JO 2020: Ivory Coast - Cameroon, Barbaro la’aan goolal la’aan ah - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »JO 2020: Ivory Coast - Cameroon, barbaro la’aan
JO 2020: Ivory Coast - Cameroon, barbaro la’aan
Waxay ahayd ciyaar adag oo jir ahaaneed ayaa ka dhacday Abidjan galabnimadii Sabtida taas oo ku dhalisay maroodiyaasha kooxda Indomitable Lionesses ee tababare Alain Djeumfa garoonka Treichville Sports Park. Kamrooniyiinta waxay si dhakhso ah naftooda u siin lahaayeen faa'iidada. 12e Daqiiqaddii, isagoo ka faa'ideysanaya qaladkii gacantiisa Djohore Cynthia, Aboudi Gabrielle ayaa seegi doona qeybta. Saddex daqiiqo ka dib, 15eAboudi Gabrielle oo laga sii daayay Tcheno Claudine ayaa waji waji ka waji la leh albaabka Ivory Coast. Sawirkiisa iskutallaabtu wuxuu u dhow yahay tirada saxda ah.
Hortiisa dhagaystayaashiisa, Maroodiyaasha waxay ku jawaabeen 20e daqiiqo. Iridda dusha sare, laadad go'an, Elloh Amon Rebecca ayaa tuuray darbo laakiin Dubu Angel, oo si fiican safkiisa ugu jira, ayaa riixaya kubbadda. Gabdhaha guur-guurayaasha Clementine Toure ayaan ka fogeyn raadinta cilladda. Si wanaagsan ayuu ugu shaqeeyay Tia Ines, Kouassi Amenan Rosemonde wuxuu wajahayaa ilaaliyaha. Pippy-kiisa aad ayuu u xoog badnaa, wuxuu ka gudbay yoolalka Cameroon. In kasta oo cabsi laga qabo 27e daqiiqad, Maroodiyaasha ayaa ku soo biiraya qolka labiska dhibicdan min 0 ilaa 0.
Qeybta labaad, labada qaab ayaa garab istaagi doona garabka. Kamaruunku wuxuu abuuri doonaa ficilkii ugu dambeeyay ee ugu weynaa ciyaartaas ka dhici doonta 90 + 3e Daqiiqaddii ciyaarta Kubadda oo jiidaysa dusha sare ee weerarka weerarka reer Cameroon laakiin Cynthia ayaa laalaab fiican si fiican u qabtay. 0 natiijada ugu dambeysa ee 0. Sida Nigeria oo kale, Côte d'Ivoire way awoodaa inay raadiso shahaadadiisa bannaanka. Kani waa tabobarad aan la iloobi karin oo u imaan doona Cameroon si ay qiimo ugu yeeshaan. Sidaa darteed iska ilaali wax qoomamo ah inta lagu jiro ciyaarta soo laabashada ee loo qorsheeyay Talaadada 12 November 2019 magaalada Yaoundé.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.camfoot.com/actualites/jo-2020-cote-d-ivoire-cameroun-match-nul-sans-but,30380.html
SC Paderborn oo ka tirsan kooxda FC Augsburg
France: Brest - Paris Saint-Germain ama ciyaarta udhaxeysa Castelletto iyo Choupo-Moting